Rant: Okwu "P" | Martech Zone
Ezigbo ndị ahịa na-enwe obi ụtọ ikwu okwu Laghachi na ulo oru mbo. Nyaahụ, agara m nzukọ na ụlọ ọrụ na-ere ụlọ nke nwere ụfọdụ nsogbu na atụmatụ weebụ ha. Ha broshuọ saịtị a na-adịghị na-akwọ ụgbọala ọtụtụ na-eduga na ha na-emefu nnọọ a bit nke ego na a ọnụ ọgụgụ nke mpụga mmemme iji ụgbọala na-eduga n'ime ha ahịa foneelu. Nsogbu anyị chọpụtara bụ na ha na-akwụ ụgwọ ụlọ ọrụ ndị ahụ niile iji soro ha rụọ ọrụ n'ịntanetị.
Kwọghachi azụ site na ntụgharị ntụgharị ndu ha na ego ha na-enweta na nso nso, anyị nyeere aka iji anya nke uche hụ ụdị mmetụta usoro ịre ahịa n'ịntanetị zuru oke nwere ike ime iji kwụọ ụgwọ ọnụahịa ọ bụla, bulie ọnụ ọgụgụ ndị ndu, ma belata ntụkwasị obi ha na ndị ọzọ. Ọ bụghị usoro abalị - ọ chọrọ ọkụ ọkụ na atụmatụ ogologo oge iji mee mgbanwe ahụ. O yiri ka ọ na-abụkarị ihe ịma aka na ụlọ ọrụ ndị na-eri isi mmalite nke ndị ọzọ.
Ha nwere obi ụtọ na nzukọ ahụ n'oge na-adịghị anya anyị ga-agbaso usoro ndị ọzọ. Ka m na-agwa kọleji gbasara ya, agbanyeghị, enweghị m ike ịre ma na-eche na okwu niile a gbasara itinye ego, nloghachi na itinye ego, ịkwụ ụgwọ azụmaahịa, ụgwọ mgbasa ozi… ya niile na-adọta na otu atụmatụ. Iji mepee usoro ịre ahịa azụmaahịa, ị ga-abawanye uru maka ụlọ ọrụ.
Mgbe e mesịrị, m na-agụ na a na-akparịta ụka na-elekọta mmadụ banyere otú ụlọ ọrụ naanị na-eche uru. Ekwetaghị m ma ọlị. 99% nke ụlọ ọrụ ndị anyị na ha rụkọrọ ọrụ - site na nnukwu ụlọ ọrụ ọha na eze ruo na mbido pere mpe - uru bara uru mana ọ bụ obere oge ha nwere ọganiihu. N'ezie, nnweta ndị ahịa, njide ndị ahịa, mgbanwe ndị ọrụ, ikike, ntụkwasị obi, na ahịa na-abụkarị ihe kachasị elu na radar ka anyị kwurula banyere ụlọ ọrụ na-enyere aka. M na-eme ihe n'eziokwu mgbe nwere ụlọ ọrụ bịakwute m na-ekwu na anyị kwesịrị ịbawanye uru - kedu ka ị ga - esi nye aka?
Nke ahụ kwuru, ọ na-ewe iwe na okwu “P” abụrụla nke a gbanyere izu karịa iti mkpu site n ’oke ugwu. Uru abụghị otu anyaukwu. Uru bụ ihe na-enyere ụlọ ọrụ aka iku, na-enyere ụlọ ọrụ aka ito, na-enyere ụlọ ọrụ aka itinye ego na nyocha na mmepe, yana - n'ikpeazụ - uru bụ ihe ụlọ ọrụ na-atụ ụtụ. N'aka ozo, ka elu ụlọ ọrụ na-enweta uru karịa, ọ ka mma maka akụ na ụba anyị. Uru dị elu na-emepụta ụtụ isi dị elu iji kwado ụmụ amaala anyị dara ogbenye. Uru dị elu na-eme ka ụlọ ọrụ ndị dị ka nke m nwee ike itolite ma nye ohere maka ọganihu na ọrụ maka ndị na-achọ ọrụ ma ọ bụ na-achọ inwe ọganihu.
Anyaukwu bụ mgbe ụlọ ọrụ na-emechu ndị ọrụ ha, ndị ahịa ha, na ọha mmadụ ihu na ihu na ụba. Companieslọ ọrụ ndị bara uru bara uru m maara na-akwụ ndị ọrụ ha ọrụ nke ọma, na-aga n'ihu na-eme ka ahụmịhe ha maka ndị ahịa ha, ma na-etinye ego ma na-enye ọtụtụ ihe na ọha mmadụ. Ha na-eme ya site na nchịkọta nke afọ ofufo, na-anaraghị ya.
Echeghị m na anyị kwesịrị ịnọ jụụ banyere ịre ahịa yana mmetụta ọ bara na uru. Echere m na anyị kwesịrị usọrọ uru… na ibu, mma. Anyị ekwesịghịkwa ịchọ ụzọ isi belata ya site na ụtụ isi na iwu. Ọ na-emegide ya.
Nke a bụ ịbawanye uru gị na oke uru gị!
Tags: ụgwọ mgbasa oziụlọ ọrụanyaukwuegomarketingmmefu ahịaurulaghachi azụmaahịa